तरकारी तथा फलफूलमा जानाजान विष नखुवाऊ « News of Nepal
तरकारी तथा फलफूलमा जानाजान विष नखुवाऊ
२४ असार २०७६, मंगलवार
केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति दैनिकरुपमा संवेदनहीन बन्दै जान थालेको छ । काठमाडौँमा प्रदूषण बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीले माक्स लगाउने दिनको अन्त्य भएको हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएर जग हँसाए । त्यसको केही दिनमा सरकारले जनतालाई विष खुवाउने निर्णय गरेर उपभोक्ता अधिकारमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको छ । सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । असार ३ गतेदेखि लागू हुने उक्त निर्णय भारतीय पक्षको दबाबका बीच फिर्ता लिएर सरकारको राष्ट्रवाद एकाएक लम्पसारवादमा परिणत भएको छ ।
आमजनताको स्वास्थ्य र भावनाविपरीत सरकारको निर्णयप्रति चौतर्फीरुपमा आलोचना बढेको छ । जनतालाई विष खुवाउने निर्णयविरुद्ध संसद् र सडकमा चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलमात्रै होइन नेकपाभित्रै पनि यसको खुलेरै आलोचना भएको छ । भारत होस् वा तेस्रो मुलुकबाट तरकारी आयात गर्नुपर्ने हामी नेपालीको नियति बनेको छ । तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको पीडा त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, त्यसमाथि विषादी परीक्षण नै गर्न नपर्ने आत्मघाती निर्णय गरेर सरकारले जनताप्रति जवाफदेही नरहेको पुष्टि गरेको छ ।
दुई तिहाइको बलियो मानिएको सरकार कति निरीह रहेछ भने उसले भारतीय पक्षको दबाब एक महिना पनि थेग्न सकेन । विडम्बना ! राज्यसँग विषादी परीक्षण गर्ने संयन्त्रको अभाव थियो भने हठात् विषादी परीक्षणका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई किन निर्देशन दियो ? तरकारी तथा फलफूल बोकेका सवारीसाधन भन्सार विन्दुमा रोकिँदैमा सरकार किन फतक्कै गल्नुप¥यो र दास शैलीमा आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुप¥यो ? यति बेला कम्युनिस्ट सरकारको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा परिणत भइसकेको छ । सीधै जनताको भान्सासम्म पुग्ने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलमा खुलेआम प्रवेश रोक्नु सरकारको दायित्व हो र हुनै पर्छ ।
जनताको भान्सामा विषादीयुक्त तरकारी भित्रिन थालेको दशकौँदेखि हो । यद्यपि, सरकारले यस विषयमा परीक्षण गराएर भित्र्याउने निर्णय आफैँमा स्वागतयोग्य थियो । तर, सकारात्मक सन्देशको सञ्चार नहुँदै सरकारले घुँडा टेक्यो । हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र हचुवामै फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिले सरकार जनअधिकारका पक्षमा संवेदनशील नरहेको प्रस्ट हुन्छ । सरकारको यो आत्मसमर्पणवादी शैलीले भारतबाट आयातीत तरकारी तथा फलफूल विषादीयुक्त नै भए पनि उपभोक्ताले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो देशवासीकै लागि अभिशापको विषय हो ।
सरकारले सार्वजनिक चासो र जनहितका विषयमा भारतको दबाबमा आफ्नो निर्णय सच्याउनु घातक छ । भारतमा निर्यात हुने अलैँची, अदुवा, गोलभेँडा, चिया तथा फलफूलमा खाद्य स्वच्छताका नाममा नेपाली किसान दाजुभाइले विषादी परीक्षणका नाममा अनावश्यक दुःख पाउने गरेका छन् । नेपालमा खपत हुने ४४ प्रतिशत फलफूल तथा तरकारीको हिस्सा भारतबाटै आयात हुने गर्छ । यति ठूलो परिमाणमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गराउन नपर्ने नीतिले आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको छ ।
सरकारले समयमै प्रयोगशाला र उपकरण खरिदविना नै विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था ल्याउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । देशभर रहेका आठवटा परीक्षण केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी विषादी परीक्षणको निर्णय गरेको भए पनि यति धेरै विवाद चुलिने थिएन । भारतका अधिकांश जिल्लामा उत्पादित तरकारी तथा फलफूलमा ७५० गुणाभन्दा बढी विषादी रहेको भनी युरोपेली मुलुकहरुले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको दृष्टान्तलाई मध्यनजर गरी जनतालाई प्रत्यक्ष विष खुवाउने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ । विषादीरहित तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकारले यथाशीघ्र आफ्नो निर्णय सच्याउँदै भन्सार विन्दुमा विषादी परीक्षण कार्य सुचारू गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
– सन्तोष रेग्मी, काठमाडौं ।
फुटपाथे खानेकुरामा नियन्त्रण खोइ ?
हिजोआज व्यापारका नाममा जनस्वास्थ्यको ख्याल नगरी जथाभावी खानेकुरा बिक्री वितरण भइरहेको पाइन्छ । तर, मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने यस्ता अस्वस्थ खानेकुराको बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्नेतर्फ जिम्मेवार निकायले चासो देखाएको पाइँदैन । विशेष गरी विद्यालय, क्याम्पस, सार्वजनिक स्थल तथा मानवीय चाप बढी हुने स्थानहरुमा यस्ता खानेकुराको निर्बाध बिक्री भइरहेको पाइन्छ । फुटपाथ, चोक, चौबाटोदेखि चौतारासम्म जथाभावी पाइने खाद्यपदार्थ कति स्वास्थ्यवद्र्धक छ, त्यसको परीक्षण र अनुगमन गर्ने संस्कार हामीकहाँ विकसित भइसकेको छैन ।
अहिले विभिन्न अस्पतालमा अस्वस्थ खाद्यपदार्थको सेवनका कारण झाडापखाला, टाइफाइड, जन्डिसका बिरामीको संख्या बढेको छ । फोहोर खानेकुरा र दूषित पानीकै कारण अधिकांश रोग लाग्ने गर्छ । तर, सरोकारवालाले अखाद्य पदार्थको सेवन निरुत्साहित गर्ने अभियान चलाउन सकेको छैन ।
केही वर्षयता साना व्यवसायीको कमाइ खाने माध्यम यस्तै सडकछेउमा भइरहेको पाइन्छ । सस्तो खाजाका परिकार, चटपट, पानीपुरीलगायत छिटो र मीठो हुने नास्ताका लागि युवा पिँढीको आकर्षण बढ्दो छ । सानो पुँजी हुने जो–कसैले पनि आफ्नो जीवन गुजारा चलाउन सडकछेउ, रिक्सा÷ठेलामा यस्ता अखाद्य वस्तुहरु बिक्री गर्दैै आएका छन् । व्यापार गर्ने कतिपयलाई त आफूले अस्वस्थ खानेकुरा बिक्री गरिरहेको ज्ञान नै हुँदैन । र, कतिपयले कमाइ हुने नाममा स्वास्थ्यका लागि घातक रसायनको प्रयोग गरेर जथाभावी खानेकुरा बेच्ने प्रवृत्ति पनि छ ।
जनस्वास्थ्यको ख्यालै नगरी सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी खानेकुरा बिक्री हुँदा स्थानीय निकायहरुले रोक्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । कतिपय यस्ता व्यापार गर्नेहरुले अज्ञानताका कारण अखाद्य पदार्थ बिक्री गरिरहेका हुन्छन्, तिनीहरुलाई चेतनामूलक ज्ञान दिएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कोहीले जानाजान नै अखाद्य रंग मिसिएका र मानव स्वास्थ्यका लागि असर पार्ने पदार्थहरु मिसाएर मिठाई तथा अन्य खाद्यपरिकार बिक्री गरिरहेका हुन्छन्, तिनलाई प्रभावकारी अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षणबाट मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
उसो त व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गरिएका भनिएका पसलहरुमा पनि खुलेआम जनस्वास्थ्यमा असर पुग्ने खालका खाद्यपदार्थ बिक्री भइरहेका पाइन्छन् । नेपालमा खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता हितका निम्ति संवेदनशील निकाय निस्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ । उपभोक्ता स्वयम् पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चिन्ता र चासो राख्ने विरलै भेटिन्छन् । छिटो र मिठोका नाममा आफ्नो स्वास्थ्यलाई दाउमा राख्ने जमात दिनहुँ बढ्दो छ । यो चिन्ताको विषय हो । समयमै सचेत बन्न सके गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आउनुअगावै जोगिन सकिने भएकाले हरेक व्यक्ति आफैंमा संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ ।
– गगन कार्की, भक्तपुर ।
सरकारभन्दा शक्तिशाली यातायात व्यवसायी
रोगको भन्दा मानिसको बढी डर भयो
जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड कहिलेसम्म सरकार ?
कानसम्बन्धी समस्यालाई बेवास्ता नगरौं
सरकारी मास्टरको मस्ती र विद्यार्थीको बेहाल
अफगानी महिलाप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै कमला भसिनलाई श्रद्धाञ्जली
मलाई हृदयाघात भएको छैन : वसन्त..
हिमालय टाइम्स दैनिकका कार्यकारी निर्देशक शर्मालाई मातृ शोक
जिल्लास्तरीय वार्षिक समीक्षा शुरु, स्वास्थ्यकर्मी र..
मासिक उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरेकामा..
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेल–इयु राजदूत नोनाबीच भेटवार्ता
मानसिक रोग छोडेर जाँदै “कोभिड”
लमजुङमा पौडेल पक्ष बलियो, राइनासमा मतपत्र विवादका कारण चुनाव स्थगित
सुनचाँदी व्यवसायी अपहरणमुक्त
स्याङ्जामा सामाजिक विकास कार्यालयको स्थापना
लायन्स क्लब काठमाडौं युनाइटेड सेन्ट्रल र रिलायन्स फाईनान्सको आयोजनामा रक्तदान